Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay, barasaabka Iowa Kim Reynolds wuxuu kaga hadlay joojinta hirarka s | KWIT
Waxaa jirey ku dhowaad 200 kun oo kiis oo guud oo wanaagsan oo loo qaybiyey 19 Iowa, iyo in ka badan laba kun oo dhimasho tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa sheegaya inay jiraan 38 dhimasho oo dheeri ah iyo ku dhowaad 4,200 oo kiisas cusub ah saaka
Talaadadii, Guddoomiyaha ayaa ku dhawaaqay sharciyo adag oo looga baahan yahay Iowans inay ku dhaqmaan kala fogaynta bulshada oo ay xirtaan waji-xirashada meelaha dadweynaha marka aysan fogayn karin bulshada. Waxay sidoo kale ku baaqday in la xadido tirada dadka isugu yimaada goobaha fasaxa.
Kulamada gudaha waxaa lagu xaddidi doonaa 15 qof ama in ka yar oo ku dhawaaqista ah, oo ay ku jiraan aroosyada, aaska, isu imaatinada qoysaska, ciidaha, shirarka, iyo kulammada kale ee "aan muhiimka ahayn". Reynolds ayaa la weydiistey inuu faahfaahin ka bixiyo sharciyadaas maadaama ay soo dhowaatay Thanksgiving-ka.
Reynolds wuxuu yiri dadku waa inay ka digtoonaadaan hareerahooda, ayna ku dhaqmaan dadaallada yareynta. Waxay sheegtay in gobolku uu dhigay talaabooyin yareyn bartilmaameed ah ayna diyaar u tahay inay garaacdo hadii loo baahdo oo ay garaacdo isla marka uu gobolku bilaabo inuu arko xoogaa isbadal ah.
Maanta govnernor wuxuu kaloo ku dhawaaqay olole weyn oo macluumaad dadweyne ah oo lala galayo dadka caanka ah ee reer Iowa sida Gudoomiyihii hore Tom Vilsack iyo tababarihii lagdinta hore ee Jaamacada Iowa Dan Gable oo ka codsanaya muwaadiniinta inay xirtaan waji iyo masaafada bulshada.
Degaanka maanta, Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay maanta waxaa jiray 133 xaaladood oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay. Degmada Woodbury waxay sii waddaa inay la kulanto faafitaanka bulshada ee muhiimka ah ee COVID-19.
Gobolka Iowa wuxuu ka warbixinayaa kororka ugu weyn ee dhimashada la xiriirta COVID-19 hal maalin gu
By Halima Osman • Nov 18, 2020
Gobolka Iowa wuxuu ka warbixinayaa kororka ugu weyn ee dhimashada la xiriirta COVID-19 hal maalin gudaheed.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay muujineysaa 40 kale oo Iowans ah inay u dhinteen dhibaatooyinka cudurka 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Heerka imminka imika ee 14-maalmood ee tijaabada ah ee Degmada Woodbury ayaa xoogaa kor u kacay ilaa 23.5%. Heerku wuxuu ahaa 18% Nofeembar 1deeda iyo ku dhowaad 15% bil ka hor.
Somali News 11.17.20
By Halima Osman • Nov 17, 2020
Waaxda Dadweynaha ee Iowa ayaa ku soo warrameysa 35 dhimasho kale oo ka dhalatay dhibaatooyinka COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay iyo in ka badan 3,500 oo kiisas cusub ah. Waxaa intaa sii dheer, gobolka ayaa dhigay rikoor kale oo ku saabsan isbitaallada la dhigo fayraska.
Shir Jaraa’id oo maanta uu qabtay Gudoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa waxa uu ku sheegay in hadii isbedelada hada socda aysan badalin xayiraad dheeraad ah la saari doono si looga hortago faafida viruska loona fududeeyo kor u kaca daryeelka caafimaad.
Somali News: 11.16.20
Gudoomiyaha Kim Reynolds ayaa si toos ah ula hadli doona dadka reer Iowans ee ku saabsan COVID-19 6:05 caawa.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiskeeda ayaa lagu sheegay in Reynolds ay ku dhawaaqi doonto tillaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo fayraska waxayna ka hadlaysaa baahida ay Iowans u qabto ku-dhaqanka dadaallada yareynta fayraska.
Nebraska, Gov. Pete Ricketts ayaa maanta soo bandhigay xayiraad caafimaad oo cusub oo adag oo uu qor
By Halima Osman • Nov 13, 2020
Nebraska, Gov. Pete Ricketts ayaa maanta soo bandhigay xayiraad caafimaad oo cusub oo adag oo uu qorsheynayo in lagu soo rogo haddii bukaanada COVID-19 ay buuxiyaan 25% ama ka badan sariiraha isbitaalka.